Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Nekena i Caldolor ho fanalana fanaintainana alohan'ny fandidiana
Ny Cumberland Pharmaceuticals Inc., orinasa pharmaceutika manokana, dia nanambara androany fa ny US Food and Drug Administration (FDA) dia nankatoavina ny fametahana marika ho an'ny Caldolor®, famolavolan'ny ibuprofen amin'ny intravenous, mba hampidirana ampiasaina amin'ny fitantanana mialoha ny fandidiana.
Ny marika vaovao nankatoavin'ny FDA dia ahitana fampahalalana momba ny famantarana sy fampiasana ny vokatra, ny isan'ny marary sahaza, ny valin'ny fandinihana klinika, ny mety ho voka-dratsiny, ny antsipirian'ny fiarovana ny marary, ary ny torolàlana ampiasaina amin'ny vehivavy bevohoka, ankizy ary mponina hafa.
Ny fanohanana an'io fampiasana Caldolor nitarina io, ny fanadihadiana momba ny fanaintainan'ny fandidiana orthopedique dia nanamafy ny fihenan'ny fanaintainana lehibe rehefa nomena ny vokatra isaky ny enina ora (nanomboka mialoha ny fandidiana) miaraka amin'ny morphine fanampiny azo alaina araka izay ilaina. Ny totalin'ny marary 185 dia natao kisendrasendra ary notsaboina tamin'ny Caldolor® 800 mg na plasebo omena isaky ny enina ora (nanomboka mialoha ny fandidiana) sy ny morphine nomena araka izay ilaina.
Ny fahombiazana dia naseho ho toy ny fihenan'ny statistika lehibe kokoa amin'ny hamafin'ny fanaintainana mandritra ny 24 ora aorian'ny fandidiana ho an'ny marary tsaboina amin'ny Caldolor® raha oharina amin'ireo nahazo plasebo.